National Power News:: को थियो गौचनको हत्यारा ? National Power News:: को थियो गौचनको हत्यारा ?
को थियो गौचनको हत्यारा ?
Wednesday, October 11, 2017 National Power
२५ असोज,काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्याको एक दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले अपराधीबारे कुनै सुइँको पाउन सकेको छैन । सोमबार दिउँसो घरबाट गाडी चढेर निस्केका गौचनको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो । गोली हानेलगत्तै दुई युवा मोटरसाइकल चढी बेपत्ता भएका थिए ।प्रहरीले गौचनको हत्यामा सार्प सुटरको प्रयोग भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । छाती र पेटमा लगातार तीन गोली प्रहार भएलगत्तै अचेत भएका गौचनको अस्पताल नपुग्दै मृत्यु भएको थियो ।